Duufaanta Irma, oo ah tii ugu xooganeyd taariikhda ee Atlantik, waxay geysaneysaa khasaaro aad u badan | Saadaasha Shabakadda
Duufaanta Irma ayaa laga arkay Xarunta Caalamiga ah ee Hawada
Irma ayaa hadda si rasmi ah u noqday duufaantii ugu xoogga badneyd taariikhda ee laga sameeyo Atlantic. Iyadoo qaarkood dabeylo isdaba joog ah oo ku dhowaad 300km / saacaddii, iyo cabir la mid ah kan Faransiiska, ayaa sii wadaya horumarkiisa oo sababay dhaawac weyn. Awooddiisu aad ayey u weyn tahay in xitaa seismograph-yada ay ogaan karaan jiritaankiisa. Waxay horay u taabatay jasiiradaha Caribbean ee Anguilla, Antigua iyo Barbuda. Haatanna waxay ku sii jeeddaa Cuba, Puerto Rico, iyo Gobolka Florida.
Duqa magaalada Miami-Dade, Carlos Giménez, ayaa taas xaqiijiyay "Duufaanta Irma waxay u taagan tahay khatar culus oo ku soo food leh Florida, South-Dade iyo gaar ahaan aaggeenna". Waxaa jira amarro guuritaan ballaaran oo meelo kala duwan ah. Sidoo kale waxay bixiyeen khariidad loogu talagalay dadka ku nool Miami iyo meelaha u dhow, meelaha daadgureynta waxay kuxirantahay halista joogitaanka halkaas inta lagu jiro marinka aadka u macquulsan ee duufaanta. Ka sakow dabaylo xoog leh, roobab culus iyo daadad khatar ah ayaa la filayaa meel kasta oo ay dhaafaan.
Xaaladaha hagaagsan ee keenay Irma
Marka loo eego digniinta khubarada saadaasha hawada, iyo xitaa xaaladda degdegga, waxay xaqiijinayaan taas saameynteeda waxay noqon kartaa mid aad uga sii masiibo badan intii la filayay. Tusaale wanaagsan ayaa ah Harvey, kaas oo soo maray xoojin aad u xoog badan ka hor inta uusan dhulka dhigin. Irma, in kasta oo ay gaartay qeybta 5aad, haddana uma muuqato inay raacdayso qaabkii caadiga ahaa ee inta hartay duufaannada Atlantika. Badanaa markay duufaanku gaarto heerka ugu sarreeya, waxay ahaan jireen "kuwo jilicsan", mar walbana waxaa jiray dhacdo naadir ah. Irma way adkeysatay.
Waxaa ka mid ah arrimaha ugu habboon, heerkulka baddu wuxuu u dhexeeyaa 1 ilaa 1ºC diiran, taas oo ka dhigaysa duufaan xoog badan. Xiirashada dabayshu way hooseysaa, taasi waa, hawadu si xorriyad leh ayey u socon kartaa korna u baxeysaa. Ma jiro daruuro boodh oo Sahara ku wareegaya oo ku teedsan badweynta Atlantik, waana dhakhso ku filan in biyaha diirran ee ka soo baxaya duufaanta ay saameyn ku yeeshaan heer kulkeeda. Marka laga soo tago xaqiiqda ah inaysan weli taaban, arrimahaas oo dhan waxay door ka ciyaareen caawinta Irma inay noqoto waxa ay tahay.
Su’aasha weli taagan oo sidoo kale beryahanba la hadal hayey ayaa ah, miyey qasab tahay in miisaanka Saffir Simpson lagu daro qaybta 6?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Duufaanta Irma, oo ah tii ugu xooganeyd taariikhda ee Atlantik, waxay geysaneysaa khasaaro aad u badan